၁၀၀ စတုရန်းမီတာနီးပါးရှိသောတိုက်ခန်းတစ်ခန်း၏ဒီဇိုင်း | အနုပညာအာရုံ - အိမ်နှင့်ဥယျာဉ်အတွက်စိတ်ကူးများ
100 sq.m. နီးသောတိုက်ခန်းဒီဇိုင်း
22.04.2019 Posted by: အနုပညာ Senses
တိုက်ခန်းများ, ဗိသုကာအတတ်ပညာ, မူလစာမျက်နှာ
ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စတုရန်းမီတာ ၁၀၀ နီးပါးရှိသောတိုက်ခန်းတစ်ခန်း၏အယူအဆဆိုင်ရာဒီဇိုင်းကိုတင်ပြမည်ဖြစ်သည်။ အခန်းတစ်ခန်းအနေဖြင့်ဒုတိယအိပ်ခန်းသို့မဟုတ်ကလေးအခန်းအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည့်အချိန်တွင်အ ၀ တ်အထည်၊ မီးပူdeskရိယာနှင့်စားပွဲခုံပါရှိသည်။ စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည့်အချက်မှာရေချိုးခန်းအတွင်းရှိပြတင်းပေါက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တိုက်ခန်းဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ရှားပါးသောပန်းချီကားတစ်ချပ်ဖြစ်သည်။ ပရိဘောဂများသည်စတိုင်ကျလှသည်။ areaရိယာတစ်ခုစီတိုင်းတွင်ကွဲပြားခြားနားသောအသံထွက်တစ်ခုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
၁။ ဝင်ပေါက်ခန်းမနှင့်စင်္ကြံ - ၁၄.၈ မီတာ;၊ 1. မီးဖိုချောင်နှင့်ထမင်းစားခန်း - 14.8m²; 2. ရေချိုးခန်း - 17.7m²; 3. အိပ်ခန်း - 8.8m²; 4. အခန်း - 18.4m²;
6.Hall - 23m²။
ရင်းမြစ် - Turovi ဒီဇိုင်းစတူဒီယို
တိုက်ခန်း, တိုက်ခန်း 100 စတုရန်း, တိုက်ခန်းဒီဇိုင်း, တိုက်ခန်းအတွက်အကြံဥာဏ်များ, အတွင်းပိုင်းအတွက်စိတ်ကူးများ, room ည့်ခန်းစိတ်ကူးများ, အတွင်းပိုင်း, တိုက်ခန်း၏အတွင်းပိုင်း, အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း, တိုက်ခန်းတစ်ခန်း၏အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း, ပရိဘောဂ, တိုက်ခန်း, အိမ်မှာစိတ်ကူးများ, အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း, ပရိဘောဂ, အတွင်းပိုင်းစိတ်ကူးများ, ဒီဇိုင်းစိတ်ကူးများ, ခေတ်သစ်အိမ်, အလှဆင်အတွေးအခေါ်များ, အနုပညာစိတ်ကူးများ
လိုအပ်ပါကစင်ပေါ်ကိုလည်းကြီးစွာသောမြို့ရိုးအအလှဆင်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ မင်းဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင် ...
ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးသည်ကျောင်းသွားသည့်နေ့သည်သူ့ဘ ၀ တွင်အရေးအပါဆုံးဖြစ်သည်။ ယခု မှစ၍ …
ပွင့်လင်းတိုက်ခန်း 70 စတုရန်း၏အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း
ပွင့်လင်းသောနေရာများ၊ လေ၊ အလင်းနှင့်အရောင်များစွာပါသောအလွန်လှပသောတိုက်ခန်းဖြစ်သည်။ ဒီထဲမှာ ...
brown ည့်ခန်း၏အညိုရောင်၊ အ ၀ ါရောင်နှင့်အဖြူရောင်ဖြင့်နေထိုင်သောအခန်း၏အတွေးအခေါ်များနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်အဓိကအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတစ်ခုသို့တိုးချဲ့ပါမည်။
Room ည့်ခန်းအကြံဥာဏ်များ - 15 နှင့် 20 ရင်ပြင်အကြားဒီဇိုင်း
လက်ရှိ living ည့်ခန်းစိတ်ကူးများသည်အခန်းများကိုမှန်ကန်စွာဒီဇိုင်းဆွဲသည့်အခါကွဲပြားခြားနားသောရူပါရုံများကိုတင်ပြပါမည်။
အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း - ဘဲဥပုံဆိုဖာနှင့်အတူ Living ည့်ခန်းအကြံပြုချက်များ
ဘဲဥပုံ living ည့်ခန်းဆိုဖာအတွက်ဒီအတွေးအခေါ်များနဲ့အတူအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းအယူအဆများစွာကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။